Ubudlelwane phakathi ezimbini abantu, amadoda nabafazi kufuneka iphande ize ukuncedisa ukumiselwa kwalo imisebenzi kunye.
Xa abantu umsebenzi ngaphandle nokusilela elidlulileyo, get omtsha umgangatho ngakumbi yokuhamba-hamba kwi ilungelo icala.
Casual Dating akwenzeki
Ebomini bethu kukho okkt abo uninzi ngokucacileyo kwaye ngokupheleleyo unako ukunceda ibandakanye ezifunekayo imiba okanye ukunika kuyimfuneko ukunika ifuthe. Kubalulekile ukuba uzive nzulu, ukubona ngokubanzi kwaye hayi kuba noloyiko le. Emva zonke, ihlabathi ayikho limited kuphela yintoni abantu abaqhelekileyo, abantu abaqhelekileyo, kwaye ngamanye amaxesha imposed.Kukunceda kakhulu ukufunda ukuba uthando, yamkela thina nabanye abantu, hayi liqonga»disservice»kwaye releasing, ukuba imeko ufuna oko.
Ngamanye amaxesha partners kwi budlelwane ingaba abachaphazelekayo malunga nokuba ngabo bathanda ngalo mzuzu zabo onyulwe ukuba abe nabameli boluntu. Ngamanye amaxesha ukubangcwaba kwabo, xa umbindi we-Universe kuba omnye umntu. Uthando nokuba kunye nabo okanye ingaba ngoko ke obsessed kunye addiction ukuba umxholo ka-umnqweno ngu-hayi ixesha elide eyahlukileyo, eyodwa ihlabathi, kwaye elula ekujoliswe kuwo. I-imbono esikunika kuthi into sidinga.Uthando ibiza kuba yaziswe ka-yangaphakathi umthamo, umnqweno ukunika nokunika, ngelo xesha, njengoko addiction uhlutha yokugqibela yakhe ukomelela painful kwaye ufuna kakhulu ngakumbi kangangoko kunokuba inje kunokwenzeka. Partners kusini na efunekayo ukuze bahlangane okulindelweyo ngamnye enye. Bawufincile izizathu enze enye indlela okanye enye, ngokunjalo yayo eyodwa ndlela, oko ibe enye indlela ezimbini, okwexeshana okanye ngokusisigxina, kwaye unako zange ngokwenene kuba crossed.Njengokuba umthetho, dependent budlelwane nabanye»barren»kwaye destructive, ngenxa morbid banqwenela ukuba injured i-subconscious ukuze bazuze ukukholosa ngomhla iindleko ezinokufumaneka ka-oyintanda illusory. Kwi harmonious budlelwane partners bahlala kunye ngokufanayo iinjongo ubomi, kodwa ngamnye ufumana eyahlukileyo integral personality.
Kukho ababini abadala abo wadala a Union ngokusekelwe intlonipho, usebenzisa ikhompyutha nganye ezinye kwaye mutual uxanduva. Balungile kunye, kodwa ngokwahlukeneyo ukususela longing ayikho ke detrimental, kodwa endaweni yoko warms warmth kwaye adequacy ka-iingcinga ngakulo a wayemthanda omnye.Lo mnqweno ukubeka neqabane nto kodwa intlungu kwaye disappointment ukuzisa ingabi nako. Amandla uvakalelo kwi-dependent budlelwane nabanye ukuchongeka a uluvo kolonwabo, kodwa hayi ngenxa yomnqweno bafune ngamnye ezinye ukufunda
← Free web incoko
Dating usebenzisa ikhamera yedijithali →